10 Ukuqhekeka Kwamadolobha Kakhulu EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 10 Ukuqhekeka Kwamadolobha Kakhulu EYurophu
I-Europe ihlala isikhumbuza ngeHollywood yakudala nobukhosi. Ngakho, ukugqashuka kwedolobha kwelinye lamadolobha amangalisayo aseYurophu kuhlala kumayelana nezinto ezinhle empilweni. Ukudla okuhle, isiko, kanye nomlando ngokusonteka okhethekile nobunjiniyela obuthatha umoya wethu, yizinto ezimbalwa nje ezenza iYurophu iphuphe.
Kusuka emabhishi eNice kuya kubha yesibhakabhaka eVienna, yethu 10 amakhefu amahle kakhulu wedolobha eYurophu azodlula okulindelwe kakhulu.
Ukuhamba ngezitimela kuyindlela ye-Eco-Friendly Yokuhamba eYurophu. Lesi sihloko kulotshiwe sokuba umuntu afunde izindlela zemininingwane Hamba nge- Gcina Isitimela, I Eshibhe zemininingwane Amathikithi Iwebhusayithi In The World.
1. Ukuqhekeka Kwamadolobha Kakhulu EYurophu: Vienna, Austria
Uma kuphela nge-Sachertorte, isiko likashokholethi wendabuko, nakanjani kufanele ubheke iVienna ngekhefu lakho ledolobha eYurophu. Maphakathi nesonto noma ngempelasonto ende, IVienna inikeza ukubonwa okuningi okuthandekayo nokubukwa kwemizi yedolobha okuzokususa umoya wakho.
Qala eKahlenberg kusuka lapho ungabona khona yonke indlela kuze kufike kumaCarpathians eSlovakia. Bese uqhubeke uye esiqhingini sokufakelwa eDanube ngesithombe sepikinikhi futhi ubheke eVienna e-Franziskanerplatz isikwele ukuze uphuze ikhofi yaseViennese eposini. Vala usuku ngama-cocktails e-Das Loft yesibhakabhaka bese uhlangana nabantu bendawo.
Lezi ngezinye nje zezinto ezikhethekile okufanele uzenze eVienna uma ufuna ukusebenzisa ikhefu lakho ledolobha eVienna njengeViennese yeqiniso.
Itholakala phakathi kweSwitzerland neGerman, eduze kwesifunda esihle saseRhine eFrance, IColmar yidolobha elakhiwe futhi elihle. Yingakho lo muzi omncane ungenye yezindawo ezinhle kakhulu zokuphumula idolobha eYurophu. Ngibonga ngosayizi wayo omncane futhi ucebile 1000 Umlando waseYurophu ongeza esimweni sawo somlingo, ngokuqinisekile uzothandana ekuqaleni kokubona bese ubuyela ukuhlala isikhathi eside.
Umzuzu lapho ufika eColmar uzozwa ngokushesha sengathi ungene kungxoxo yezingane. Indlela enhle yokuchitha ikhefu lakho ledolobha eYurophu izulazula imigwaqo iye eVenice encane, ima for a ingilazi yewayini, ubuchule be-Alsace.
UColmar ulungele ikhefu lomuzi kaKhisimusi futhi muhle kakhulu ngempelasonto yasentwasahlobo.
I-Paris ukuya ku-Colmar ngesitimela
I-Zurich kuya ku-Colmar ngesitimela
Stuttgart to Colmar by Isitimela
ILuxembourg kuya kuColmar ngesitimela
3. Ukuqhekeka Kwamadolobha Kakhulu EYurophu: Venice, Italy
Amabhuloho, izindlu ezingajwayelekile nezinemibala, iphunga le-pizza ne-Aperol, yenza iVenice a indawo oyiphuphayo okwehlukaniswa kwedolobha eYurophu. Usayizi wayo omncane, iminyuziyamu, futhi izinto zizokugcina umatasa isikhathi eside futhi esifushane ngempelasonto. Kukhona i-piazza encane nje ekhoneni kusuka esikhungweni esiphithizelayo, lapho ungahlala khona emuva, ube ne-cappuccino ne-panini, noma ziphathe okumnandi kuphekwe nge-pizza esitofini sakudala.
Uma uhlela ukuphuma ngempelasonto ende, iziqhingi ezinhle zaseBurano naseMurano zimane nje zingukuhamba ngesikebhe.
UMilan uya eVenice ngesitimela
IPadua iye eVenice ngesitimela
I-Bologna iya eVenice ngesitimela
IRoma iye eVenice ngesitimela
4. Ukuqhekeka Kwamadolobha Kakhulu EYurophu: nice, France
Akukho okunye okuqabula ukwedlula uhambo olusheshayo oluya e-French Riviera ngempelasonto. I-Nice enhle kanye nogu lwayo kuyindawo enhle yokwephuka kwedolobha okungasoze ngakulibaleka eYurophu.
ICote D'Azur indawo emabhishi ahamba phambili eNice kuthi iLa Tour Bellanda ingaphuthelwa kulawo makhadi weposi ukubukwa nokushona kwelanga. Ukuqhekeka kwedolobha eNice kumayelana nokuhlala okuhle nokudla okuhle. Ngakho, impelasonto eNice izokukwenza uzizwe njengobukhosi.
I-Paris to Nice ngesitimela
Ingahlekela eParis ngesitimela
Iziteshi eziya eLyon ngesitimela
Into yokuqala efika engqondweni lapho umuntu ecabanga ngokuqhekeka kwedolobha e-Amsterdam yisifunda samalambu abomvu, ngebhayisikili, nemisele. kodwa, leli dolobha elincane laseYurophu linokuningi kakhulu esingakunikeza.
Ngentwasahlobo i-Amsterdam iqhakaza ngemibala egqamile futhi yonke indawo lapho ujika khona ubukeka njengekhadi leposi. Imisele, izikebhe, emabhayisikili, nezimbali zilindele ukufaka umbala kwi-albhamu yakho yezithombe. Qala emnyuziyamu weTulip bese ungena eJordaan, i-maze yamakhefi nezitolo ezincane zasendaweni, noma amapaki e-Oost neRembrandt a epikinikini nokuphumula.
IBrussels eya e-Amsterdam ngesitimela
I-Berlin eya e-Amsterdam ngesitimela
I-Paris ukuya e-Amsterdam ngesitimela
6. Ukuqhekeka Kwamadolobha Kakhulu EYurophu: Cinque Terre, Italy
ICinque Terre yiqembu 5 ezimibalabala futhi amadolobhana amahle futhi nakanjani kuzoba ngelinye lamakhefu amahle kakhulu wedolobha owathathayo empilweni yakho. Ekwindla nasebusika, ICinque Terre ingubuhle bokulala, kepha ehlobo kuyaphithizela njenganoma yimuphi idolobha laseYurophu. Okukhulu kunayo yonke inzuzo ye-Cinque Terre uma uqhathanisa nemizi yaseYurophu ukuthi ungahamba kalula futhi uvakashele 5 amadolobhana angaphansi 3 izinsuku. Ngakho-ke, ukuhamba ngezitimela eCinque Terre kulula kakhulu futhi kukhululekile ukuthi ungaya kunoma imiphi imizana engaphansi 20 amaminithi.
Ukuhlala emadwaleni futhi ubheke ulwandle ngamabhishi amahle, ICinque Terre iyisimangaliso. Ngaphezu kwalokho, kunamakhofi amaningi, zokudla, imibono, futhi izintaba ukuze ihambisane nanoma yikuphi ukunambitheka. Ngakho, uma ufuna ukuphumula ngengilazi yewaini ku- izivini zasendaweni noma uthole okubi, khona-ke ukuhlukana kwedolobha eCinque Terre kukulungele.
ILa Spezia eManarola ngesitimela
URiomaggiore eManarola ngesitimela
USarzana uye eManarola ngesitimela
ILevanto kuManarola ngesitimela
7. ePrague, I-Czech Republic
Izingadi zikabhiya, amapaki aluhlaza, imibono emangazayo, futhi izinsolo zokuzulazula zingena, yenza iPrague ikhefu ledolobha elifanele eYurophu. IPrague iyikhaya lezinqaba ezibukekayo, umlando, izimakethe zasekhaya, nezindawo zokudlela ezinhle zekhofi lapho ungabamba khona ikhofi no-khekhe ongahamba kuzo futhi ube nepikiniki kwelinye lamapaki alo amaningi. Futhi, kunezindawo eziningi ezifihliwe futhi ezinhle zokuhlola nokugwema izixuku zezivakashi.
IPrague yindawo edume kakhulu yokuqhekeka yedolobha eYurophu, noma ingagcwala kakhulu unyaka wonke. kodwa, kusakufanele ngokuphelele ukuvakashelwa ngempelasonto emfushane. Okwamanje uphuma esitimeleni, uzothandana nalokhu okhangayo futhi olunothile idolobha.
8. Ukuqhekeka Kwamadolobha Kakhulu EYurophu: Brussels, Belgium
Uma unezinyo elimnandi, uzoba neholide lokuphumula idolobha elimangalisayo eBrussels. IBrussels inokuningi ongabelana ngakho nokukubonisa, njengokujabulisa kwayo ushokoledi owaziwa umhlaba wonke nama-waffles. Ngaphezu kwalokho, Ngaphezu kwe 100 iminyuziyamu ikulindile eBrussels. Ngemuva kokuvakashela abahamba phambili ungabhekisa kuDanseart ukuze ulume ukudla ezindaweni zokudlela ezinhle kakhulu. Enye into ebalulekile eBrussels yindawo ebukekayo ye-Sainte-Catherine neChatelain ye-chic namasiko.
IBrussels izokuthokozela ukukubambisela ukuthola okufishane noma ngempelasonto ende. Ungumuzi onendawo yonke enobuhlakani nesitayela umuntu anoma iyiphi ubudala angaziqonda.
ILuxembourg iye eBrussels ngeSitimela
I-Antwerp eya eBrussels ngeSitimela
I-Amsterdam eya eBrussels ngeSitimela
I-Paris iya eBrussels ngeSitimela
Idolobha lesibili ngobukhulu eJalimane kungenye yezindawo ezingcono kakhulu zokuqhekeka kwedolobha eYurophu. IHamburg iyikhaya lesichibi esikhulu kunazo zonke ezweni kanye namachibi angaphakathi ne-Outer Alster, lapho ungajabulela khona a ukugibela isikebhe esimangalisayo.
I-Planten un Blomen ingadi ye-botanic enokubukwa okuhle nezindawo zezithombe. Ngakho, upakisha kangcono ikhamera yakho futhi ulungele ezinye isibhamu esikhulu ukuze wabelane ngamaholide akho amangalisayo eHamburg.
IHamburg to Copenhagen ngeSitimela
IZurich iya eHamburg ngesitimela
Rotterdam eHamburg ngeSitimela
10. Ukuqhekeka Kwamadolobha Kakhulu EYurophu: Budapest, Hungary
Enye yezinto ezinhle kakhulu ongayenza eBudapest ukuthatha uhambo ngesikebhe wehle umfula iDanube. Indlela enhle yokwazisa idolobha nokwakhiwa kwalo eBudapest esikebheni. Ngemisebenzi emihle yangaphandle nangaphakathi, inhloko-dolobha yaseHungary ifinyelela phezulu phezulu 10 ukuhamba kwamadolobha okuhle kakhulu eYurophu.
Ukuhlola amabhuloho, vakashela okugeza kwendabuko okushisayo, futhi unambitha ukudla kwaseHungary yizinto okufanele uzenze ukuze uzizwe njengendawo eBudapest. Futhi, Qiniseka ukuthi uvakashela uMathias isonto, Umphathi weFisherman, kanye nePhalamende ngokubuka kwelanga ngalomuzi.
Lapha e Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza ekutholeni amathikithi wesitimela ashibhile kakhulu uye kunoma ikuphi kwekhefu elihle ledolobha ohlela ukulithatha!
Ngabe ufuna ukushumeka iposi lethu lebhulogi elithi “Ama-10 City Breaks amahle kakhulu eYurophu” kwisayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/best-city-breaks-europe/ ‎– (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)